ပန်ဒိုရာ: သိုက်မြုံကိုခွာရတဲ့ သိင်္ဂါရငှက်တို့အကြောင်း
ပထမဆုံးပဲဖတ်တွားတယ်.. နာကျင်သွားတယ်.. သူတို့ အတွက်ကော..ဘာမှမတက်နိုင်သေးတဲ့ ကိုယ်အတွက်ကော
အဲဒီ စာကြောင်းလေး အကြိုက်ဆုံးပဲ.. ဟုတ်တယ် ခေတ်က တောင်းဆိုလာတဲ့အခါ နူးညံ့မှုတွေ မာကျောလာတတ်တာပဲ
မပန်.. နင့်ကနဲ ခံစားသွားပါတယ် ။
ဂျစ် ဝေမျှတဲ့ မှောင်ဝင်ပန်းချီကား ဆောင်းပါးအောက်မှာ နွေဦးတေး ဆိုသူက ခုလို ရေးခဲ့ပါတယ် ..
ဂျစ်... သေကွဲရှင်ကွဲပေါင်းများစွာရဲ့ကြားမှာ ကျနော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘ၀တွေရှိကြတယ်။ ဒါကို ကျနော့်အနေနဲ့ဆိုရင် ပေးဆပ်တယ်လို့ မသတ်မှတ်ချင်ပါဘူး။ ပေးဆပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့နောက်မှာ မျှော်လင့်မှုတခုခုကပ်ပါနေတယ်လို့ ခံစားရလို့ပါ။ ပြည်သူ့အတွက် ကွက်လပ်ဖြည့်နေတယ်လို့ပဲ ဆိုပါရစေ။
...... ပြီးရင် ပြန်လာခဲ့နော် ..တဲ့…ဆွေးဆွေးမြေ့ မြေ့ ..ထိသွားတယ်….
မြကျွန်းသာ ဆိုတဲ့စကားလုံး မြင်လိုက် ရတိုင်း..စာဆက်မဖတ်နိုင်လောက်အောင်..ကွန်းခိုခဲ့ ရာနေရာတွေ ကို သတိရ..ရသွားတယ်…တကယ့်ကို အရည်အချင်းရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အနုပညာသမားတွေ မွေးထုတ်ခဲ့ရာနယ်မြေဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်လေ.
ခေတ်တွေထပ်မလင့်စေ ဖို့ 
မြကျွန်းညိုညို ပြန်လည်စိုပြေ ဖို့ ……..
သူတို့ တွေ အတွက်ရေးတဲ့ ကဗျာကို သမီးတို့တွေတော့heart ထိသွားတယ်.....။
တကယ် မြင်ပေးတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ကလေးကို လေးစားတယ်..။ အဲဒီနှစ်တွေထဲ... ဆုံးရှုံးခဲ့တာ တွေ.. ဘာနဲ့မှ ပြန်ပေးချေလို့မရ..။ အမှန်ဝန်ခံရရင် ခုထိတော့ တရားခံတွေကို သင်ပုန်းမချေနိုင်ပါ..။
20 Sep 07, 05:22
WL: လူတိုင်း သိင်္ဂါရငှက်တွေချည့်။ မုန်တိုင်းကို တေးသံနဲ့ အံတုခဲ့ကြ။ ကိုယ်သီတဲ့တေးဟာ ကိုယ့်အသိုက်အမြုံပေါ့။ ယုတ္တိဗေဒတွေတော့ မလွဲကြေးပေါ့ ပန်ဒိုရာ။ ကျန်းမာပါစေ
လတ်တလောအဖြစ်အပျက်တွေကြောင့် ဒီကဗျာကို ခုမှ ဖတ်ဖြစ်တယ်။ ကှေးဇူးတင်တယ်။
လွမ်းစေတီတွေဖြစ် နေမှာ အသေအချာပါ။
အားပေးသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခေတ်ကတောင်းဆိုလာရင် နူးညံ့တဲ့ သိင်္ဂါရငှက်တွေဟာ မီးပုံထဲက ပြန်ရှင်သန်လာတဲ့ ဖီးနစ်ငှက်တွေလို မာကျော ပြင်းရှ သွားတတ်ပါတယ်။
really sorry to read this poem.
i miss my home land, i miss the smell of Tha-net-khar, i miss pagodas, i miss Padauk flower, i miss my old guitar ... and i miss everything that i left ...
oh dear ... i'm tearing now .... ;(
anyway ... thank you very much for your poem.
XQSn0B actually, that's brilliant. Thank you. I'm going to pass that on toacouple of people.